वाइडबडी जहाज प्रकरणमा २१ जनासँग धमाधम बयान – Korea Pati
April 3, 2019 July 16, 2019 LeaveaComment on वाइडबडी जहाज प्रकरणमा २१ जनासँग धमाधम बयान
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा २१ जनासँग बयान लिएको छ। संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले वाइबडीका सम्बन्धमा धमाधाम बयान लिने काम भइरहेको जानकारी दिए।
प्रदेश २ मा एसईईको प्रश्नपत्र बाहिरिएका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। प्रश्नपत्र आउट भएपछि प्रदेश २ को परीक्षा रद्द भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई सरकारले यसको अनुसन्धान जिम्मा दिइसकेको छ। तर अख्तियार पनि त्यसमा प्रवेश गर्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए। सांसद प्रेम सुवालले एसईईमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न अख्तियारसँग माग गरेका थिए।
सांसदहरूले घुसकाण्डमा मुछिएका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकका कारण अख्तियारप्रति प्रश्न उठेको बताएका छन्। सांसद महेश्वरजंग गहतराजले पाठकका कारण अख्तियारको बदनाम भएको धारणा राखे। ‘अख्तियारमै त्यस्तो हुन्छ भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? ’ उनले भने, ‘अख्तियारमा बिचौलियाको राज हुँदो रहेछ।’
उनले अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण रोकिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सांसदले ३३ किलो सुनकाण्ड, एनसेल, टेलिकमको फोरजी, मेडिकल कलेजको अवैध असुली, सार्वजनिक जग्गा, पशुपतिको जग्गालगायत विषयमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरे, आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्रा थापा गुरुङले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
पशुपति शर्मालाई नेकपाको च्यालेन्ज, पेरिसडाँडामा गुन्जियो – लुट्नुहुन्न देश (भिडियो)